I-China Mineral Fiber Ceiling BH003 ifektri kanye nabakhiqizi | Beihua
Umbhobho Wool Wengilazi
Iphaneli Wool Glass
Ukugcwala Wool Glass
I-Rock Wool Panel
I-Rock Wool Blanket
Amaminerali Fiber Ceiling BH003
Esimweni esivulekile samahhovisi, amabhodi oboya bezimbiwa anganciphisa ngempumelelo umsindo obangelwa izinqubo zokuxhumana, imishini yasehhovisi, nemisebenzi yabasebenzi, anciphise ukubuyiselwa komsindo ongaphakathi endlini, futhi anikeze amandla abasebenzi ukuthi bagxile kangcono, bathuthukise ukusebenza kahle komsebenzi, futhi banciphise ukukhathala komsebenzi. Esimweni esivaliwe sehhovisi, ibhodi yoboya yamaminerali imunca futhi ivimbele ukusakazwa kwamagagasi omsindo emoyeni, ifezekise ngempumelelo umphumela wokufaka umsindo, iqinisekise ubumfihlo bomsindo wegumbi, futhi inciphise ukuphazanyiswa okufanayo kwamakamelo asondelene nawo.
Ekamelweni lasekilasini noma kumagumbi engqungquthela, izwi lesikhulumi lidinga ukuzwakala kahle ngabalaleli kunoma yisiphi isikhundla ukuze baqinisekise ukuthi uqondwa kahle. Ngakho-ke, izinto zokwakha zidinga ukukhethwa ukuze kuqinisekiswe ukucaca komsindo wangaphakathi.
Isakhiwo sangaphakathi nesixegi esingaphakathi sebhodi yamaminerali sinokusebenza okuhle kokuguqula amandla e-wave wave. Ibhodi yoboya yamaminerali isebenzisa imicu ende ende esezingeni eliphezulu njengezinto ezingavuthiwe zokukhiqiza. Igagasi lomsindo libangela ukuba i-fiber ibuye iqhubeke isikhathi eside, engaguqula amandla e-wave wave amaningi abe amandla e-kinetic. Ngasikhathi sinye, izimbobo ezijulile ezijulile ngaphakathi kwebhodi yamatshe amaminerali zivumela amaza omsindo amaningi ukuthi angene futhi andise isikhathi sawo sokudlula. Ngaphansi kwesenzo sokuquleka, amandla kagesi omsindo aguqulwa abe amandla okushisa.
Imiyalo yokufakwa kwebhodi lezimbiwa
Okokuqala, khetha igridi ehlukene yophahla ngokuya ngemithwalo noma izidingo ezahlukahlukene.
Okwesibili, amapaneli oboya bamaminerali kufanele afakwe futhi asetshenziswe endaweni lapho izinga lokushisa lingaphansi kwama-80%.
Okwesithathu, ukufakwa kwamapaneli oboya bamaminerali kufanele kuqedwe lapho kusebenza khona amanzi ngaphakathi, kufakwe amapayipi ahlukahlukene ophahleni, futhi amapayipi amanzi kufanele ahlolwe ngaphambi kokwakhiwa.
Okwesine, lapho kufakwa amapaneli oboya obunamaminerali, amagilavu ​​ahlanzekile kufanele agqoke ukuvikela amaphaneli ukuthi angcolile.
Okwesihlanu, igumbi ngemuva kokufakwa kwephaneli yoboya obunamaminerali kufanele lingene umoya, futhi iminyango namafasitela kufanele kuvalwe ngesikhathi uma kungenza imvula.
Okwesithupha, kungakapheli amahora angama-50 ngemuva kokwakhiwa kwebhodi lenhlanganisela eyinhlanganisela, akufanele kube nokudlidliza okuqinile ngaphambi kokuthi i-glue ilashwe ngokuphelele.
Okwesikhombisa, lapho ufaka endaweni efanayo, sicela usebenzise iqoqo elilodwa lemikhiqizo.
Okwesishiyagalombili, ibhodi yoboya yamaminerali ayikwazi ukuthwala noma yiziphi izinto ezisindayo.
Esedlule: Amaminerali Fiber Ceiling BD001
Olandelayo: Amaminerali Fiber Ceiling BC004
Amaminerali Fiber Ceiling BC004
Amaminerali Fiber Ceiling BH002
Amaminerali Fiber Ceiling BD001
Amaminerali Fiber Ceiling BH004
Amaminerali Fiber Ceiling BC005